Tahriibayaal ay Somali ku jiraan oo Badda Miditereniyaanka ku Qaraqmay – Radio Daljir
Agoosto 6, 2015 2:21 b 0
Khamiis, Ogoosto 06, 2015 (Daljir) — Saraakiisha Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga (UNHCR) ayaa shaacisay in la la’ yahay boqolaal Muhaajiriin dooni ka soo raacay Xeebaha Libya, kuna sii jeeday XeebahaTalyaaniga.
Hadal ka soo baxay Hay’adda UNHCR ayaa lagu xusay inay dadkaasi ku geeriyoodeen dooni nooca kalluumeysiga oo ay lasocdeen oo ku qalibantay meel ka baxsan xeebaha dalka Libya.
Twitterka Hay’adda UNHCR waaxaa kaloo lagu sheegay in la badbaadiyey 399 qof oo ka mid ah Tahriibayaashii la socday doonidaasi oo tiradooda dhamayd 600 oo qof.
Saxafi lagu magacaabo Karl Stagno Navara ayaa u sheegay Telefishinka Aljazeera inay boqolaalka Tahriibayaasha geeriyoodeen, kadib, markii ay Qaxootiga hal dhinac u soo bateen, si ay gurmad uga helaan Markab Dagaal oo laga leeyahay dalka Ireland oo ku soo dhawaaday doonida qalibantay, laguna le’day.
Dowladda Xasan Shekh oo laga Dalbaday in ay baaritaan ku samayso Musuq-maasuqa shirkada Soma Oil